Nerd - Iyini? Meaning of igama elithi "nerd." izibonelo
Ngokwesiko ethandwa namuhla, kukhona zonke izinhlobo amazwi eziyinqaba. Ngokwesibonelo, enye intsha ngokuthi bokuhlela. Futhi ambalwa ukuthi yini yasisiza la mazwi. Hipsters, bokuhlela, zabahlakaniphile, party-goers nabanye abaningi aminyene iplanethi. Kanjani ukuba siyiqonde le kwemali, hhayi ukudida subculture efanayo?
Kusho ukuthini nerd?
Abaseduze linencazelo izwi boom - nerd. Abantu abaningi ababheke lahlotshaniswa. Empeleni akunjalo. Kulezi nemikhutshana kuleso ezimbili eduze kakhulu kunomehluko obalulekile. Ukuze uqale nge siyowuqonda ngamunye wabo.
Ngakho, boom yilowo bengidlala endaweni ethile. Kuyinto abaqoqi uhlobo. Bancike kakhulu ku fashion izimpahla uphawu. Ngamanye amazwi, bokuhlela - lawa abalandeli oyinhloko ifilimu, futhi komiks- umkhakha geym-. Kuye izithakazelo zabo, baqoqa zonke amaqiniso, imininingwane, kanye nezinye ahlobene izinto ngomdlandla.
Ngakho-ke ubani nerd? Lona indoda kakhulu isayensi. It ihlose zokufinyelela lowo mgomo. Ngakho, umehluko oyinhloko kusukela boom - focus on the Kutfola lwati, kunokuba nje iqoqo amaqiniso. Plus Booms ngokuvamile abanothando okuthile imfashini futhi ezihamba isiko. Nerd ngokuvamile nesithakazelo into muhle kangako emphakathini.
Incarnation e ezisuke zithandwa ngaleso
Ngokwesibonelo, ochungechungeni abadumile opopayi "The Simpsons" zingatholakala abameleli kokubili nemikhutshana kuleso. Ngakho boom ejwayelekile emaningi yamahlaya book nomthengisi. Konke ukuphila kwakhe lunikezelwe ukuqoqwa amaqiniso engenamsebenzi mayelana izinhlamvu yokudlala futhi nixoxe nabo nabanye abalandeli. UProfesa Frink, kunalokho, akanandaba lutho kwezobuciko ukuphila konke kwakungokwethusi womqalisi. Indlela aziphatha ngayo kancane uyinqaba, okungenzeka kakhulu, isimo sakhe sibi Autism - Aspagera syndrome. Yena ngokwakhe uye walisho ngokuphindaphindiwe ukuthi IQ yakhe iseduze uhlu 200. Lokhu kwenza kube omunye wabantu abahlakaniphe kunabo emhlabeni.
Nerd - okuyinto bungavami, kodwa okwamanje ukuthola ukuqashelwa esikweni elidumile. Ngokwesibonelo, e-movie "Revenge of the zabahlakaniphile" kuboniswa amaqembu intsha eliphikisayo ekolishi. Njengenjwayelo, ngesikhathi ibambene ukuthandwa umsubathi iqembu emphakathini ukubuyisa enquma ukudala umphakathi yabo.
Angazi uhlale eceleni futhi umdlalo umkhakha. Enye inkampani zokudala wadala ingane behlonipha abalandeli bakhe main. Ngakho umdlalo "nerd vs. Zombies", lapho kufanele ube nerd, ukulwa Zombies, uthole niche.
Nerd: yini umehluko kusuka kwamanye nemikhutshana kuleso?
Njenganoma iyiphi subculture, kusukela zabahlakaniphile anezici yabo. Ngokwesiko Russian, abantu abanjalo, kwabizwa zezitshalo. Yini ngokushesha efika engqondweni ngaleso Ukhulumé izwi? Kahle ukhomba. Ngakho-ke, uma ubona insizwa ngezibuko - kungcono ababalelwa ekhulwini amaphesenti angu-nerd. Esinye isici sici - Yazi ngamakhompyutha nobuchwepheshe bebonke. Nakuba konke lokho umuntu akuyona kakhulu imbangela, kodwa kunalokho for fun. Ngakho kalula ukubhala uhlelo ukwenza irobhothi noma abuthe ikhompyutha edolweni. Zabahlakaniphile phakathi abamele iningi amakhono obuchwepheshe, ezimbalwa kulabo ehlanganisa amaphrofayli ezimbili, futhi kuba impela into engavamile ukuthola umuntu onakekela abanye.
Nerd - abantu avaliwe. Ngakho-ke, isici - ngobunzima zokuxhumana, ngaphezu kwakho konke kumayelana wobulili obuhlukile. Ngokuvamile Nerds - abayikho abameleli ubulili besilisa. Njengomthetho, ngesisekelo yobuntu bakhe mnyewu izici ezimbili. Eyokuqala, esathola kuveza enhle ngayo emafilimini aseHollywood - kungamboza ububi. Babukeka izingubo akuthandeki nokubi kuqinisa ukukhishwa kuphela. Ezimweni ezimbi kakhulu kakhulu, nerd usenayo nezinkinga nge kwenhlanzeko. Eyesibili isici - wokuzilibazisa hhayi ethandwa kakhulu. Popular yesayensi, izincwadi zamahlaya, imidlalo ye-computer - zonke townsfolk kubonakale ungakujabulisi. Ngakho-ke, abantu abanothando kube namuntu sixoxe ngempela. Kusuka lapho, nakho okuncane.
Nerd - lokhu kuyingxenye izinkampani?
Naphezu kude kwaso, zabahlakaniphile kukhona abantu izinkampani. Njengomthetho, hlala isikhala kanye Ongoti uhlakaniphile. Ngezinye izikhathi ziba futhi yinhlekisa main. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-ethandwa isiko zabahlakaniphile ngokuvamile baba ezinkulu iqhawe ithimba-nalabo abashade nabo. Kodwa amashinga acishe never. Nakuba njengoba umphakathi abaphathe ngayo, bazibheke zabahlakaniphile: intelligence okusezingeni eliphezulu kufanele sisebenzele ukuthula.
Imfuneko ukuze Nerd - uthando lokufunda. Kunzima ukucabanga intelligence ophakeme ayithandi ncwadi. Kodwa uthando yobuciko, ambalwa ngakwazi ukuzibona kahle ngeso. Eqinisweni nerd lalingabulawa kalula ukwenza yena, ngaphezu kwalokho, ngempela ngempumelelo.
Nerd - kungcono nje abafana?
Kodwa amantombazane, zabahlakaniphile, cishe ayikho. Kungenzeka ngesimo ngasinye sazo ukubheka okubi futhi akasakhulumi. Lapha phakathi bokuhlela wobulili bubuhle kakhulu. Kuyaqondakala, ngisho abesifazane abafuna kube mkhuba.
Ngenxa ukuthuthukiswa kwe-Internet ayisekho inselele ukuthola lokhu noma lokhuya into. Ngokwesibonelo, esitolo "Geek futhi nerd." EKemerovo liye laba yindawo ukuze uyivule. Kukhona amasayithi evumela izinto oda zivela kwamanye amazwe. Ikakhulukazi esithandwayo nokubutha izinto zokuqala. Ngokwesibonelo, bomdabu umshicileli yamahlaya. Ngokwesibonelo, namuhla izvesnye iqhawe adventure ngokuqondile kusukela Melika.
By endleleni, uma ufuna ukuqonda ngokunembile lokhu subculture, kuhlanganise nengoma "zabahlakaniphile" - "SIS". umbhalo wayo uhlobo iculo kule party kanye nencazelo ezinhle izici zayo. Phela, phakathi abamele kunazo owaziwa lokhu mkhuba kungenzeka ukuthola abantu ezifana Stiv Dzhobs futhi Zuckerberg. Ngakho uma ukubiza nerd, musa ukusheshe ucasuke, futhi cabanga abameleli aziwa kakhulu ase-lo mkhuba. Khona-ke wena cishe ukucasula ukuqhathanisa okunjalo.
Ufuna isifiso sakho zizogcwaliseka ???
Awazi kanjani ukuchitha usuku ephelele? Nakani lezi zinto kancane
Amalokhi Safe: ngezigaba, izinhlobo, izinhlobo, amakilasi, kanye nokubuyekeza
Aperitifs - kuyini? Yini iziphuzo kungenziwa wakhonza njengomdala isiphuzo esigeza inhliziyo?
Okuzenzakalelayo iminyango ngokuhambisa - isixazululo ngempumelelo yesimanje
"Ferezol": ukubuyekezwa. "Ferezol": intengo, umsebenzisi, isicelo